Ogaden News Agency (ONA) – Dagaaladi U danbeeyay ee gudaha Ogadeniya ka dhaca
Dagaaladi U danbeeyay ee gudaha Ogadeniya ka dhaca
Posted by ONA Admin	/ April 19, 2013
Wararka nagasoo gaadhaya Dalka Ogaadeeniya gaar ahaan Xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo xoogan oo ka dhacay qaybo kamid ah wadanka Ogaadeeniya ee ay Ethiopia gumayssgato
Dagaaladaasi oo ah kuwo si maalinla ah u dhaca ayaa waxaa daggaaladi u danbeeyay xukuumada gumaysiga Ethiopiayana lagaga laayey askar farabadan. Dagaaladan waxay udhaceen sidatan:
04/04/2013 Aabbahay-gablan oo Shaygoosh katirsan waxaa lagu dhaawacay 4 Askari oo ciidamada gumaysiga Ethiopia ah.
07/04/2013 Dagaal ka dhacay Bubbi oo Qabridahar katirsan waxaa ciidamda mooraalka jabsan ee gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 2 Askari waxaana lagaga dhaawacay 9 kale.
08/04/2013 Garigo’anka Garbo dagaal ka dhacay waxaa Askarta saama laluudka ah ee gumaysiga madow lagaga dilay 4 Askari waxaana lagaga dhaawacay 6 kale.
11/04/2013 Kamiin ay ka xidheen Cutub katirsan NH/CWXO Huuralayowga oo katirsan magaalada Wardheer ee Xarunta gobolka Doollo ayaa waxaa Askarta gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 3 Askari waxaana lagaga dhaawacay hal askari.
12/04/2013 Weer ay ku qaadeen NH/CWXO askar gumaysi oo kusugnayd Deegaanka Haloobiya oo Baabili katirsan ayaa waxaa lagaga dilay weerarkaasi 4 Askari.
12/04/2013 Cinjirka oo Gunagado katirsan dagaal halkaasi ka dhacay waxaa maxaysatada gumaysiga afqudhmuun lagaga dilay 4 Askari.
12/04/2013 Gaadhi ay saarnaayeen Askarta gumaysiga Ethiopia oo marayey Deegaanka lagu magacaabo Dhabajiriso ayaa loo sheegay in deegaankaasi ay ka dhawyihiin NH/CWXO, cabsi xoogan oo soo wajahday darawalkii gaadhiga waday ayaa sababtay in gaadhigaasi uu ku gadoomo deegaan aan sidaasi uga fogayn Dhabajirirso waxaana halkaais ku nafwaayey inkabadan 25 Askari oo kuwa gumaysiga Ethiopia ah iyadoo uu dhaawcyo halis ah soo gaadhay tiro kale oo kamid ah askartii saarnayd gaadhiga gadoomay.
14/04/2013 Dagaal xooggan oo ku dhexmaray NH/CWXO iyo Askarta gumaysiga Ethiopia deegaanka Xagarow oo Gunagado katirsan ayaa waxaa ciidamada sii kala cararaya ee gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 6 Askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale.
Waxaa iyaguna jira dagaalo kale oo ka kala dhacay 06/04/2013, 16/04/2013 iyo 17/04/2013 Deegaanada kala ah Lo’dabaalka oo Dhanaan katirsan,Dawa oo Garbo udhow,Kabaal-qaad oo Dhagaxmadow udhwo iyo Mir lagu qaaday magaalada Dhagaxbuur waxaana dagaaladasi lagu gaadhsiiyey Askarta gumaysiga Ethiopia khasaare xoogan oo leh dhimasho,dhaawac iyo bur bur hantiyeed.